Nosokafana tany Italia ny andiany faha-3 an'ny "Andro Latvia"
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ny fanontana andiany faha-3 amin'ny "Andro Latvia" dia hisokatra any Italia
Ny fanontana andiany faha-3 amin'ny "Andro Latvia" dia hisokatra any Italia
Ny fanontana andiany faha-3 an'ny "Andro Latvia" dia natomboka tany Roma, nanatrehan'ny filoham-pirenena Baltic, Raimonds Vejonis. Ny hetsika fampiroboroboana ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'i Latvia sy i Italia dia nokarakarain'ny Agency for Investments and Development of Latvia (LIAA), niarahana tamin'ny Masoivohon'i Repoblika Latvia any Italia.
Ny "Andron'i Latvia" dia misy kalandrie misy hetsika, fivoriana b2b ary hetsika ara-kolontsaina, hatao any Roma, Milan ary Venice, hatramin'ny 24 Novambra 2019.
Ny fanendrena voalohany tany Roma, 'Taste Latvia,' dia hetsika tambajotran'orinasa, miaraka amin'ny fanandramana ireo vokatra sy lovia mahazatra nomanin'ny chef Latvian Maris Jansons, niaraka tamin'ny fampisehoana nataon'ny mpitendry mozika Latvian Līga Liedskalniņa an'ny duo “Ramtai”.
Hanaraka izany, ao anatin'ny andro vitsivitsy, amin'ny fampirantiana ireo zavatra noforonin'ireo mpanakanto mpanefy volamena Letoniana Anita Savicka sy Anna Fanigina, voalahatra ao amin'ny atrikasa firavaka Simonelli.
"Ny firenentsika roa dia mifamatotra amin'ny fifamatorana ara-javakanto sy kolontsaina matanjaka ary antenainay fa ity hetsika ity dia hiteraka fifandraisana ara-barotra mahasoa sy fotoana iray ahafahana mampivelatra ny fifandraisana eo amin'ny orinasa," hoy ny filohan'ny fanjakana Latvian.
Ny hetsika, raha ny marina, dia ny hanome topy maso an'i Latvia - manomboka amin'ny famaritana ireo sehatra stratejika sasany, toy ny teknolojia sy fizahan-tany, hatrany amin'ny sehatry ny fampandrosoana ho an'ny orinasa, noho ny fitondrana hetra manokana, ho an'ireo mpandefa haingam-pandeha sy mpampiditra orinasa, ho fanohanana ny besinimaro an'ny fampandrosoana ny zava-baovao, ary koa ny fahombiazan'ny fahalalana sy ny vokatra, novolavolain'ny orinasa Latvian.
Mandritra ny 'Andron'i Latvia' fivoriana b2b marobe dia hampiroboroboan'ny LIAA mivantana, ny masoivohon'ny governemanta Latvian ho fampiroboroboana ny fampandrosoana orinasa, izay manamora ny fampiasam-bola avy any ivelany, ary miaraka amin'izay dia mampitombo ny fifaninan'ny mpandraharaha Latvian eo amin'ny tsena anatiny sy any ivelany.
Ny masoivohom-panjakana, izay mirehareha amin'ny biraon'ny solontena 20 any ivelany, dia izy ihany koa no andrim-panjakana misahana ny fampiroboroboana ny fizahantany any Latvia. Noho ny sidina mivantana an'ny Air Baltic, miasa avy any Roma, Milan ary Venice, dia misy fitsidihana fonosana vaovao natolotra.
Ireo masoivohon'ny fizahan-tany avy ao amin'ny Gulf Cooperation Council (GCC) dia mitsidika an'i Seychelles
American Airlines dia manohy ny sidina faharoa isan'andro Miami-Saint Lucia